Dhakhaatiir Reer Somaliland Ah Oo Madaarka Muqdisho Taransit Ku Ahaa Oo...
Dhakhaatiir reer Somaliland ah oo madaarka Muqdisho taransit ku ahaa oo…
Arbaco, Luulyo, 14, 2021 (Wararka-Maanta) – Dhakhaatiir reer Somaliland ah, oo madaarka Muqdisho taransit ku ahaa, ayaa baasbooradi laga jeex jeexay, isla markaana la xidhay kadibna Hargaysa loo mastaafuriyay.Dhakhaatiirta oo ka hawl gala isbitaalka Adna Adan ee Hargaysa ayaa u socday waddanka Kenya iyagoo ku safrayay baasboorka Somaliland.
“Waa shaqaale caafimaad oo tababar u socday, oo ku safrayay baasboorka Somaliland, oo fiise loogu soo saaray” sida waxa tidhi Adna Aadan Ismaaciil.
D.R Adna Aadan ayaa sheegtay in dhakhaatiirta baasabooradoodi laga jeex jeexay, isla markaana la xidhay kadibna Hargaysa loosoo mastafuriyay markii ay gadheen madaarka Aadan Cadde.
“Dadkii ka sokeeya meesha ay ku socdaan baasboorada lagama qaado, lagamana jeex jeexo, dhib kalena looma gaysto” ayay tidhi Adna.
“Meesha ay u socdaan ayaa hadii ay aqoonsantahay dalku gal ka, u ogolaata ama u diida” ayay hadalkeeda sii raacisay Adna.
D.R Adna Aadan ayaa sheegtay in falka shaqaalaheeda lagula kacay uu yahay sharci daro.
“Haday Soomaaliya garanayso sharciga dad taransit ah baasboorka kamay qaadeen oo kamay jeex jeexdeen, 3 maalmood qafaalasho kumay haysateen” ayay tidhi.
Dhakhaatiirtan ayaa markale u safri doona Kenya iyadoo baasboorada dib loogu cusboonaysiin doono waxana la filaya in ay Addisababa mari doonaan.
Guddoomiyahii degmada Buula burte oo xilka qaadis lagu sameeyay iyo mid…
Xukuumada Somaliland oo ka hadashay qaabka loo qaadanayo shaqaalaha…
Wararka Maanta : Maxaa looga hadlay kulanka uu maanta Rooble la qaatay wakiilada beesha...
Wararka Maanta : Amxaarada oo DAGAAL ku dhowaaqday iyo xaaladda Ethiopia oo faraha ka b...
Wararka Maanta : Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay banaanbaxyada rabshadaha iyo boobka wata...
Jimco, Luulyo, 23, 2021 (Wararka-Maanta) – Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay la kulantay khasaare kale oo weyn, kaddib markii duqeyn xagga cirka ah ay ku garaacday dagaalamayaal ku sugnaa inta u dhexeeysa Qaycad iyo Xarardheere ee gobolka Mudug.War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta ee dowladda ayaa lagu sheegay in weerarka duqaynta lagu dilay dhowr dagaalyahanno, sidoo kalena lagu burburiyay hub.
Lama sheegin tirada dhimasho ah, inkastoo bayaanka lagu xusay in la qiimeeynayo waxyeelada weerarka.
Wararka Maanta : Dumar Muslimiin ah oo iyaga oo aan ogeyn la xaraashay - Caasimada Onli...
Dowladdu ma sheegin cidda ka caawisay weerarka cirka ah, mana jirin wax xaqiijin ah oo ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Afrika ama AMISOM.
Horraantii toddobaadkan, Mareykanku ayaa qaaday duqeyntiisii ugu horreysay tan iyo markii maamulka Biden la wareegay talada dalkaas.
Caalamka Videos21 hours ago